Iddoo Gahumsaa Dhiyoo - Seattle Traffic
Iddoo Gahumsaa Dhiyoo
Biiznasiiwwan naannichaa gargaaraa, waa’ee olloota keessan baraa, akkasumas West Seattle Peninsula daawwachuun carraa tajaajilawwan naannicha jiranitti fayyadamaa.
Daqiiqaa 15-20 Kan Fagaatu: Giroosariiwwan, tajaajila waldhaansaa, iddoo daawwannaa aadaa, manneen barnootaa, fermaataa tiraanziitii, fi iddoowwan bashannanaa yeroo boqonnaa isin irraa fagina daqiiqaa 15-20 keessatti argaman.
Naannichumaa Soorachuu: Lixi Siyaatil kun, ristoraantotaa fi kaaffeewwan Siyaatil keessatti beekamoo ta’an ni qaba. Buna ykn dhiyaana bituun jaarmiyaalee biiznasii naannichaa kanneen haa tumsinu.
Addababayii Lixa Siyaatil: Walakkaa Lixa Siyaatilitti, Addababaychi, tajaajila shopping, soorataa, fi kanneen biroo dabalataa ni dhiyeessa.
South Park Keessatti Qofa: Naannoon Seattle’s South Park kanneen akka Riistoraantota, kaaffeewwan fi manneen daabboo-keekii, giroosarii, tajaajila ogummaa fi giddugalawwan waldhaansa fayyaa ni qaba. Biiznasiiwwan South Park barbaadaati hawaasa keessan naannichaa gargaaraa..